Touët-de-l'Escarène - Wikipedia
43°50′54″N 7°21′57″E﻿ / ﻿43.8483°N 7.3658°E﻿ / 43.8483; 7.3658
I Touët-de-l'Escarène dia kaominina ao amin'ny fivondronan'i Nice, ao amin'ny departemantan'i Alpes-Maritimes, ao amin'ny faritr'i Provence-Alpes-Côte d'Azur, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 06142. I Noël Albin no ben'ny tanàna mandritry ny taona 2008–2014. Ilay kaominina dia kaominina mpikambana amin'ny fivondronan-kaominin'i Pays des Paillons
Ny isam-ponin'i Touët-de-l'Escarène dia 300 mponina araka ny fanisana natao tamin'ny taona 2008. Ny haavon'ny toerana ambany indrindra dia 374 metatra. Ny haavon'ny toerana avo indrindra dia 1080 metatra. Ny fisiana ara-daharampehintany ary ara-daharanjarahasin'ilay kaominina dia 43.8483° ary 7.3658° amin'ny soratra desimaly. Ny faritr'ora dia GMT+1.
Eo amin'i www.communes.com
Hita tao amin'ny "http://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Touët-de-l%27Escarène&oldid=615826"	Sokajy : TanànaTanàna any FrantsaTanàna ao amin'ny faritr'i Provence-Alpes-Côte d'Azur	Menu de navigation
Voaova farany tamin'ny 11 Martsa 2013 amin'ny 17:19 ity pejy ity